बैतडीका १० पालिका मध्ये ९ को संस्थापन पक्षमा परिणाम आएको छ, हामी सहजै चुनाव जित्छौँ : बिष्ट
नेपाली काग्रेंसको महादिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा नेताहरु कार्यक्रता रिझाउनमा ब्यस्त छन् । अधिकाशं जिल्लामा वडा तथा पालिका अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको काग्रेंस अब जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा छ । यतिबेला नेताहरु आ आफ्नो पक्षमा मत तान्न निकै दौडधुपमा छन् । बैतडी जिल्लामा संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । संस्थापन पक्षबाट शिवराज भट्ट तथा पौडेल समुहबाट चतुर बहादूर चन्द समुह चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । के छ बैतडीमा काग्रेंस महादिवेशनको तयारी । यही बिषयमा केन्द्रित रहेर स्टेट सेभेन अनलाइनका सह सम्पादक दिनेश बिष्टले काग्रेंस बैतडीका सचिव तथा उप सभापति पदका उम्मेदवार बिर बहादूर बिष्टसंग गरेको कुराकानी
सचिव ज्यु स्वागत छ
के छ बैतडीमा काग्रेंस महादिवेशनको तयारी र हालसम्मको अवस्था
हालसम्म हाम्रो जिल्ला बैतडीको ८४ वडा र १० वटा पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश तथा जिल्लाको अधिवेशन बाँकी छ नेपाली काग्रेंस केन्द्रिय समितिले निर्णय गरे अनुसार सम्पन्न हुँदैछ । काग्रेंसलाई २१ औँ सताब्दी अनुसारको राजनितिक दलको रुपमा बिकास गर्न मैले जिल्ला उप सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छु, म अहिलेको कार्य समितिमा सचिवपनि छु ।
बैतडीको संगठन सुदृढीकरणका लागी लोकतान्त्रीक ४ तारे चौतारी अन्त्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रमपनि हामीले यो कार्यकालमा चलाएका थियौँ । पार्टीलाई थप सशक्त थप सुदृढ बनाउन र बिषेशगरी बैतडी जिल्लाबासीका बिकाससंग जोडिएका एजेण्डा समाजमा स्थापित गराउनका लागी मैले चाही उप सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । यसमा काग्रेंसका सबै तह तप्काहरुलाई सहयोगका लागी अपिल गर्दछु ।
बैतडीका १० वटै पालिकाको अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्नुभाछ ?
अधिकाशं चाही स्थानिय तहमा सर्बसम्मत भएको छ । कतिपय स्थानिय तहमा सहमती नहुँदा निर्वाचन भएका छन् । जतिपनि पालिकामा नेतृत्व आएको छ एकदमै उर्जाशिल नेतृत्व आएको छ । पालिकामा हुने बिकासका कुरा, संगठनका कुरा काग्रेंसलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने किसिमको टिम आएको छ ।
बैतडीमा दुई टिम प्रस्ट देखिएका छन् तपाइको टिमबारे बताउनुस न ?
राजनितिमा बैचारिक समुहहरु हुन्छन् । बैतडीमापनि दुई टिम बनेका छन्, बिषेशगरी एजेण्डाका बिच प्रतिस्प्रधा हुन्छ । हाम्रो चाहीँ अहिलेका सभापति तथा सम्माननिय प्रधानमन्त्री शेर बहादूर देउवा नेतृत्वकै टिम हो । सभापतिमा शिवराज भट्ट हुनुहुन्छ । बैतडीमा ब्यक्तीगत र सामाजिक टिम बनेका छन् । यहाँका लागी बढी योगदान शेर बहादूर देउवाको भएका कारण हामी संस्थापन पक्षमै रहेर महादिवेशनमा लागेका छौँ ।
वडा र पालिका अधिवेशनमापनि दुई प्यानल बनेका होलान कस्तो रह्यो वडा र पालिका अधिवेशन ?
सामान्यतया हेर्दाखेरी देउवा निकटकै अधिकाशं मान्छेहरु सर्बसम्मत भएर आएका छन् । बैतडीका ८४ वडा र १० पालिकामा यो समुहको बर्चश्व छ । यो समुहसंग अग्रज नेतृत्वहरुकोपनि साथ रहेकाले हाम्रो जित निश्चित छ ।
जित निश्चित कसरी अर्को टिमपनि बलियोनै छ नी ?
पहिलो कुरा त एजेण्डानै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हामीसंग काग्रेंस बनाउने एजेण्डा छ, बैतडीको बिकास गर्ने स्पस्ट योजना खाका रहेको छ । अर्को कुरा जसले बैतडीको संगठन बनाउन पसिना बगाएको छ, समाजमा बिकास निर्माणका कुरा अगाडी बढाएका छन् ति सबै मान्छेहरुको हामीलाई साथ छ । अर्को कुरा ग्रास रुटमा रहेको नेतृत्वमापनि शिवराज भट्टको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सक्छ, समाज बनाउन सक्छ, बिकृतीका बिरुद्ध आवाज उठाउन सक्छ, हरेक समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने बिश्वास छ त्यस कारण अहिलेको संस्थापन पक्ष शिवराज भट्ट नेतृत्वको टिमले चुनाव जित्छ ।
साथ कसको कस्तो छ ?
अग्रजहरुको लामो अनुभव, संघर्षको श्रृखंला, नयाँ जोश जाँगर भएकाहरुको सहभागिता भएको हामीसंग टिम छ । हामीले सबै क्षेत्र, सबै किसिमका ब्यक्तीहरुलाई मिलाएर टिम घोषणा गरेका छौँ । हामी चुनाव जित्छौँ । दौडधुपपनि निकै चलिरहेको छ । मेहेनत गरेका छौँ साथीभाइहरुको राम्रो सपोर्ट छ । अधिवेशनमा हाम्रो जित निश्चित भइसकेको छ ।